पर्सामा तीन यात्रु लिएर गुडिरहेको अटोमाथि जब एक बाघ जाई लाग्यो, अनि नसोचेको घटना भयो यो हेर्नुस – Gorkhali Dainik
March 28, 2021 1074
यात्रु बोकेर गुडिरहेको सवारी साधनमा बाघ जाइ लागे के होला? त्यसमा सवार यात्रुको अवस्था झन के होला? यस्तै घटना पर्सामा भएको छ । त्यहाँको वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडकखण्ड अन्तर्गत ठोरीको शि का री बासमा गुडीरहेको अटो रिक्सामाथि बाघ जाई लागेको छ ।
उक्त अटो रिक्सा ठोरी गाउँपालिका २ चोकबजारबाट बिजयबस्तीतर्फ जाँदै गरेको थियो । ना २ ह ६२९० नम्बरको अटोमाथि शनिबार साँझ ७ः३० बजे बाघ जाई लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक अशोक साहले जानकारी दिएका छन् ।
‘चालकसहित तीन जना सवार अटोमाथि बाघले एक्कासी आ क्र म ण गरेको रहेछ,’ साहले भने, ‘बाघ जाई लागेपछि अटो अ नि य न्त्रि त भई प ल्टि न पुगेको रहेछ ।’
तर राम्रो पक्ष अटोमा सवार यात्रुलाई बाघले केही गरेन । अटो र यात्रुलाई त्यस्तै अवस्थामा छोडेर बाघ भने भारतको जंगलतर्फ छिरेका कारण कुनै मानवीय क्षति भने हुन भने पाएन । दुर्घटनामा अटोरिक्साको अगाडिको भागको सि सा फु टे को, छत कु च्चि ए को प्रहरी निरीक्षक साहले जानकारी दिएका छन् । सोही क्रममा पूर्वतर्फबाट आइरहेको आफ्नो गस्ती टोलीले दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरुको उद्दार गरेको उनले बताए ।
स्थानीय अटो सञ्चालक समेत रहेका बुद्धिबहादुर गुरुङका अनुसार अटो दुर्घटना हुन पुग्दा अटोचालकलाई सामान्य चोट लागेको छ ।